March 2016 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Hunger Games: Mockingjay - Part2(2015)မြန်မာစာတန်းထိုး
8:22:00 PM 2015, The Hunger Games, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 11 comments
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မင်းသမီး Jennifer Lawrence ရဲ့ နာမည်ကြီး
The Hunger Games ဇာတ်ကားရဲ့ လေးကားမြောက်ဖြစ်သလို
The Hunger Games ပရိတ်သတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့
ဒီဇာတ်ကားကို ဇာတ်ရေလည်ဖို့အတွက် အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့
The Hunger Games သုံးကားကို ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်..။
အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ The Hunger Games ၃ ကားကိုမကြည့်ရသေးရင်
ဒီလင့် မှာ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
အခု The Hunger Games: Mockingjay - Part2(2015)ကိုမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့
ပုံမှန်အတိုင်းပဲ pCloud ကနေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒီဇာတ်ကားကို ကျနော်ညီ အေးချမ်း က
မြန်မာပြည်ကနေ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး တင်ပေးထားတာပါ..။
Download 480p 550 MB
10:30:00 PM 2014, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်5comments
Adventure, History အမျိုးအစား ကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးပါ..
မင်းသမီးချော Ye-jin Son ပါဝင်တဲ့
ဒီဇာတ်ကားကို ကျနော်ညီ အေးချမ်း မှ
အမှန်အကန် အခွေက ထုတ်ပြီးတင်ပေးထားတာပါ..။
အခုတလော ရုပ်ရှင်တွေ ဘာသာပြန်ပေးနေတဲ့
Admin (K.M.A) နေမကောင်းဖြစ်တာရယ်..။
ကျနော် မောင်ချမ်းငြိမ်း မအားတာရယ်မို့
အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကိုအားနာပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်ကားတကားဆို တကားဇာတ်ကားကောင်းတွေ
Download 480p 520 MB
8:09:00 PM Evil Dead, Horror, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, သရဲကား No comments
Evil Dead2ကြည့်ပြီးတော့ အက်ရ်ှလေ တခြားဂြိုလ်ကို
The Evil Dead.1(1981) မြန်မာစာတန်းထိုး
Evil Dead.2 (1987) မြန်မာစာတန်းထိုး
Download 480p 390 MB
8:19:00 PM 2015, မြန်မာစာတန်းထိုး တရုပ်သိုင်းကာ6းcomments
ဒီတခါတောင်းဆိုထားကြတဲ့တရုတ် Action, Horror ကားဖြစ်တဲ့
Mojin-The Lost Legend ဆိုတဲ့ကားကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကားရဲ့ မူရင်းခေါင်းစဉ်က The Ghouls ပါ
တိုင်းပြည်အပိုင်း ၃ ပိုင်းကွဲသွားခဲ့ရတယ်
ဒါနဲ့ပဲ မိုဂျင်းရှောင်ဝီ ဆိုတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်
တတိုင်ကိုထွန်းရမယ် တကယ်လို့ ဖယောင်းတိုင်မီးသာငြိမ်းသွားရင်
သွားရလိမ့်မယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ရုတ်တရက်
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဟူဘင်ရီနဲ့ဝမ်ခိုင်ယွမ်တို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်ပေါင်း ၂၀က သူတို့တိတ်တခိုးချစ်ရတဲ့ ဒင်စီရန်(Angelababy) နဲ့အတူတူ အဖွဲ့လိုက်ရှာဖွေရေးခရီးထွက်ကြရင်း
8:23:00 PM 20166comments
လက်ရှိ US မှာရုံတင်နေတဲ့ London Has Fallen (2016)
ကားသစ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် CAM အဆင့်ထွက်ဆိုပေမယ့်
ဒီကားကတော့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစားပါ
Benjamin Asher(Aaron Eckhart)ကိုလုပ်ကြံတဲ့အခါမှာတော့
လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး Mike Banning(Gerard Butler) မှသက်စွန့်ဆံဖျားကယ်တင်မှုများကို
2013 ကထွက်ထားတဲ့ Olympus Has Fallen မကြည့်ရသေးသူများ
Download 755 MB
10:01:00 PM 2016, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
2016 ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲကြည့်ချင်သူများအတွက်
12. Best Writing Adapted Screenplay
15. Best Animated Feature Film
16. Best Film Editing
18. Best Sound Editing
19. Best Sound Mixing
20. Best Sound Mixing
23. Best Production Design
24. Best Makeup
25. Best Makeup
26. Best Makeup
27. Best Animated Short Film
28. Best Documentary Short Subject
29. Best Original Music Score
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်အတိုင်း pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးအကြီးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်
12:23:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
မင်းသား Vin Diesel အသည်းစွဲသူများအတွက်
ဒီကားကတော့ Action, Crime, Drama အမျိုးအစားပါ
၇ နှစ်ကြာအောင်လိုက်နေရတဲ့ မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်
မန်မို အား မက္ကဆီကိုမှာ ရှောင်(Vin Diesel) တို့အဖွဲ့ ၀င်ရောက်
ဖမ်းဆီးနိူင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရှောင်နဲ့သူ့အပေါင်းအပါများ အိမ်ပြန်ကာ
ချစ်တဲ့သူ ဇနီးများနဲ့ ပြန်လည်အနားယူရင်းပျော်လို့မှမဆုံးသေး
ဒီကားမှာရှောင်အဖြစ် Vin Diesel နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း
အဖြစ် Larenz Tate တို့အဓိကပါဝင်ထားပြီးအပစ်အခတ်အကြမ်း
မကြည့်ရသေးသူများ ကြည့်ကြည့်ပါဦးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်း pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးအကြီးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်
Download 480p 445 MB
Download 720p 835 MB
12:23:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, အန္ဒိယရုပ်ရှင်3comments
မင်းသား Salman Khan နှစ်သက်သူများအတွက်
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Salman Khan နှစ်ကိုယ်ခွဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်
ထားပြီး ၁၅၀၀ အချစ်၊၅၂၈ မေတ္တာတွေနဲ့ဖွဲ့နွဲ့ထားခြင်းပါ
တော်ဝင်တဲ့ ဘုရင်မျိုးနွယ်တွေရဲ့ခမ်းနားလှတဲ့ အဆောင်အယောင်နဲ့
အတူ နန်းတော်အတွင်း မိသားစုတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အမျိုးမျိုးသော
Download 480p 720 MB
12:22:00 AM 2015, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီကားကတော့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
မင်းသမီး Milan Jovovich မှ Kate Abbot အဖြစ်
တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်စစ်ဖြစ်ပွားပြီး လေယာဉ်
ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့ EmilBlan အား နယူးယောက်ခ်မြို့ရဲ့
အထင်ကရဖြစ်တဲ့ Time Square တွင် Happy New Year
ပါတယ် လေဆိပ်တွင် ပတ်စ်ပို့ စစ်ရာမှ Kate Abbot ဟာသံသယ
ရှိတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရာ ဘီလ်မှ သားဖြစ်သူနှင့်အကြပ်ကိုင်ထားတဲ့
အတွက် လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် Kate Abbot ဟာ ထိုကိစ္စကိုသင်္ကာမကင်းတဲ့အတွက်စုံစမ်းပါတော့တယ်
Kate Abbot ကိုရှင်းဖို့အတွက် မင်းသားကြီး Pierce Brosnan(Nash) ကိုစေခိုင်းခဲ့ရာ ဘီလ်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပသောစားသောက်ဆိုင်တွင်
Kate Abbot တို့တဖွဲ့လုံးဗုံးခွဲလုပ်ကြံခံခဲ့ရပေမယ့် Kate Abbot ဟာ မထင်မှတ်ပဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ် Kate Abbot
နောက်ကို Nash ဟာ ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်ပြီးရှင်းခဲ့ရာ
12:21:00 AM Shah Rukh Khan, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, အန္ဒိယရုပ်ရှင်4comments
မင်းသား Shah Rukh Khan နဲ့ မင်းသမီး Kajol တို့ပါဝင်ထားပြီး
Asperger's syndrome ရောဂါဝေဒနာသည် ရစ်ဇ်ဗန်ခန်း
အဖြစ် ရှရွတ်ခန်းက ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဟာ တကယ့်ကို
လောကမှာလူ ၂ မျိုးပဲရှိတယ် တမျိုးကကောင်းတာလုပ်တဲ့ လူကောင်းနဲ့ မကောင်းတာလုပ်တဲ့ လူဆိုး
ဆိုတဲ့စကားကို ခန်းဟာ ဦးနှောက်
သူ့ညီရှိရာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် သူ့ညီဇာကီရာ့ခန်းရဲ့ ကုမ္ပဏီမှအလှကုန်ပစ္စည်းများ
ကိုလိုက်ရောင်းရင်း ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က မန်ဒီရာ ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အမေနဲ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် မန်ဒီရာကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲ နှစ်သက်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် မန်ဒီရာကလည်း ခန်း ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ဥာဏ်ကောင်းတာကိုသဘောကျပြီး
ခန်းနဲ့မန်ဒီရာ တို့လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာတော့ ဘန်ဘေးလ်ကိုပြောင်းခဲ့ကြပါတယ် သူတို့မိသားစုဟာ ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်
ခွဲခြားမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် ထိုဘာသာရေးခွဲခြားမှုဟာ သူတို့ရဲ့သားဆမ်မီအပေါ်ကိုကျရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ခန်းနဲ့မန်ဒီရာ တို့အိမ်ထောင်ရေးဟာလည်းပြိုကွဲခဲ့ရပါတော့တယ်
မန်ဒီရာက အမေရိကန်သမ္မတထံသွားတွေ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် ခန်းဟာသမ္မတကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်....
ကျနော့်နာမည် ခန်း ပါ ကျနော်အကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ပါဘူး
Download 480p 656 MB
12:20:00 AM 2015, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီကားကတော့ မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ဇာတ်ကားသစ်ပါ
Biography, Drama, Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
IMDb rating:7.7 ရရှိထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်
ဒီကားထဲမှာ မင်းသားကြီး Tom Hanks ဟာရှေ့နေ
James B. Donovan အဖြစ်နဲ့
ဆိုဗီယက်ရုရှားစပိုင် Rudolf Abel အဖြစ် Mark Rylance တို့က
ရုရှားစပိုင် ရူဒေါ့ခ်အေဘီ နဲ့ အမေရိကန်ဘက်မှ လေယာဉ်မှုး
ဖရန်စစ်ဂယ်ရီပါဝါစ် နဲ့ ကျောင်းသားဖရီဒရစ်ခ်ပါရာတို့အား
၂ ယောက် ၁ ယောက် လဲလှယ်ဖို့အတွက်
Download 480p 575 MB
12:19:00 AM 2015, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, အန္ဒိယရုပ်ရှင်6comments
ဒီကားကို စာတန်းထိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြည့်ချင်သူများတောင်း
ဆိုထားတာကြာပါပြီ 720p မထွက်သေးတာနဲ့တင်မပေးဖြစ်တာပါ
ဒီကားထဲမှာတော့ ၁၅၀၀ ချစ်မေတ္တာနဲ့ ၅၂၈ ညီအစ်ကိုချစ် ညီအစ်မချစ်
ဖခင်နှစ်ဦးရဲ့ရန်ငြိုးကြောင့် ချစ်သူနှစ်ဦးကွဲခဲ့ရပြီး ညီနဲ့ညီမတို့အလှည့်
( ဒီဇာတ်ကားရဲ့ တချို့အခန်းမှာ စကားပြောနဲ့စာတန်းမကိုက်တာ
အနည်းငယ်ရှိပါတယ် အဲဒါကတော့ ကျမ Admin;K.M.A ရဲ့
Download 480p 620 MB